Britain oo ka cabsi qabta jabhadda ISIS - BBC News Somali
Britain oo ka cabsi qabta jabhadda ISIS
21 Juunyo 2014
Booliska dowladda Britain ayaa doonaya inay aalada internetka ka saaraan muuqaal muujinaya rag British ah oo ka barbar dagaalamaya jabhadda ISIS ee jihaad doonka ah ee ka dagaalanta wadammada Suuriya iyo Ciraaq.
Muuqaalkan Video-ga ah lama cadaynin waxa uu yahay, Balse ra'iisul wasaaraha Britain David Cameron, ayaa sheegaya in jabhadda ISIS ee jihaadka wada ay Britain ku tahay khatar weyn.
Haras Rafiiq, waa la taliye ka faalooda arrimaha argagaxisada waxuuna sheegayaa in Jabhadda ISIS ay tahay mida ugu lacagta badan argagaxisada aduunka ayna doonayaan inay calaamka xukumaan kuna fidaan.
Rafiiq waxuu intaasi raaciyay in ISIS ay ka khatar badan yihiin kooxda Al-qaacidah.
Aabe dhalay laba jihaadiyiin ah oo ka tagay waddanka Britain si ay ugu biiraan dagaalka ka socda Suuriya, ayaa ka codsaday boqolaal u dhalatay Britain oo ku lug leh kooxaha xagjirka ah ee gobolka in ay joojiyaan dagaalka oo ay dib ugu soo laabtaan dalkooda.
Mid ka mid ah wiilasha Axmed Muthana, oo lagu magacaabo Naasir, ayaa waxa uu ka soo muuqday Video ay Jimcihii soo dhigeen barta internetka kooxda xagjirka ah, iyagoo ugu baaqay reer galbeedka inay kusoo biiraan dagaalka ka socda wadammada Suuriya iyo Ciraaq.
Dagaalada oo Baqdaad ku sii dhawaanaya
USA oo khubaro milateri u diraysa Ciraaq
Ciraaq oo codsi u dirsatay Mareykanka
19 Juunyo 2014
Sicirka shidaalka oo kordhay